"गलत स्ट्रिप नक्सा" का कारण भारतीय सिमा कञ्चनपुर, पर्चुइमा बिबाद । के हो "स्ट्रिप नक्सा"? - Lekhapadhee
लेखापढी २९ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:०८
भारतसँग सिमा जोडिएका ठाउँबाट दिनप्रतिदिन झडपका घटना आइरहेका छन । सिमा बिबादका झडपहरुमा भारतीय दादागिरी शैली र हेपाहा प्रबृत्ति प्रमुख जिम्मेवार देखिएको छ । यी झडपमा सिमानाका जनताले ज्यानको बाजी नै लगाएर प्रतिकार गरेको देखिन्छ।
आफु हेपिएको थिचिएका बेला कमिलाले त हात्तीसँग लड्ने जाँगर गर्छ भने यो लाचारिपन कहिलेसम्म? कहिलेसम्म मौन भएर बस्ने ?
तर नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरु कानमा तेल हालेर बस्नुको रहस्य के हो ? के भारतसँग मुकाबला गर्न हिम्म्मत नभएर चुपचाप बसेको हो ? जनता सिमानामा लडिरहँदा सरकार चुप लाग्नुको कारण के हो ?
के अझै एक्सनमा जाने बेला भएन र ? आफु हेपिएको थिचिएका बेला कमिलाले त हात्तीसँग लड्ने जाँगर गर्छ भने यो लाचारिपन कहिलेसम्म ? कहिलेसम्म मौन भएर बस्ने ?
सन्दर्भ कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरि नगरपालिका – ८, पर्चुइ स्थित हुलाकी राजमार्ग निर्माण स्थलमा डकैति शैलीमा भारतीय सुरक्षा फौज हातहतियार सहित नेपाली भुमिमा प्रबेश गरेर निर्माण कार्य लथालिङ्ग पार्दै आगामी दिनमा उक्त कार्य नगर्नु भन्दै धम्की दिएर फर्क्याे।
आखिर के हो स्ट्रिप नक्सा? पुराना एक जङ्गे पिलर देखि अर्को जङ्गे पिलर सम्म सिधा लाइन खिचेर बनाएको नक्सा स्ट्रिप नक्सा हुनुपर्ने हो । स्ट्रिप नक्सामा जङ्गे पिलरको बीचका पिलरलाई पनि स्ट्रिप नक्साले समेटेको हुनुपर्छ। यदि यो स्ट्रिप नक्सा जङ्गे पिलरका आधारमा बनेको हो भने समस्या आऊनु नपर्ने हो। तर के कारणले स्ट्रिप नक्सा नमिलेको हो भन्ने प्रश्न जनमानसमा उब्जिएको छ।
हुलाकी रोड बनिरहेको जमिन समेत भारतले आफ्नो भन्ने हिम्मत किन गर्‍यो ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएकोछ । स्थानीय जनताको अनुभवको आधारमा यस्तो बिबाद सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण; केही नापि बिभागका कर्मचारीहरुको दबित मानसिकता र कतिपयकाे देश प्रतिको गद्दारी प्रबृत्ति जिम्मेवार रहेको भन्ने आवाज उठेको छ ।
भारतीयहरुले स्ट्रिप नक्सालाई आधार मानेर बखेडा गरेको देखिन्छ। आखिर के हो स्ट्रिप नक्सा ? पुराना एक जङ्गे पिलरदेखि अर्को जङ्गे पिलरसम्म सिधा लाइन खिचेर बनाएको नक्सा स्ट्रिप नक्सा हुनुपर्ने हो । स्ट्रिप नक्सामा जङ्गे पिलरको बीचका पिलरलाई पनि स्ट्रिप नक्साले समेटेको हुनुपर्छ। यदि यो स्ट्रिप नक्सा जङ्गे पिलरका आधारमा बनेको हो भने समस्या आऊनु नपर्ने हो । तर के कारणले स्ट्रिप नक्सा नमिलेको हो भन्ने प्रश्न जनमानसमा उब्जिएको छ। स्ठानीयका भनाइ अनुसार भारतले बेलाबेला पिलर गायब गरेको र कतिपय ठाउँहरुमा पिलर उखेलेर नेपालतिर सारेकाेले बिबादित अवस्थामा पनि अनुमानका भरमा स्ट्रिप नक्सा तैयार पारिएको हो । यो कार्यमा नेपाली नापी बिभागका कर्मचारीहरुको कमजाेरीपन र जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाे देखिन्छ । साथै नदीलाई पनि सिमा आधार मान्ने भन्ने विवादित सिद्दान्त उपयोगमा ल्याइएका कारण स्ट्रिप नक्सा सहि बन्न सकेन । स्ट्रिप नक्सा बनाउदा स्थानीय जग्गा धनीलाई कुनै जानकारी समेत दिएको देखिएन । यी सबैकारणले नेपालको लाखौं हेक्टर भुमि भारतले आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएको देखिन्छ।
अब के गर्ने ? :
१) परापुर्ब कालदेखी नै आफुले भोग चलन आएको जमिन भारतीय जालसाचीका कारण छोड्न सकिन्न । तसर्थ तत्काल सरकारले स्ट्रिप नक्सा सच्याउने काम अघि बढाउनुपर्दछ।
२) नदिको धार अनुसार सिमा निर्धारण गर्ने सिद्दान्त खारेज गर्नुपर्दछ ।
३) जनताले सदियौ देखि जोतपोत गरेका आधारमा सिमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
४) जंगे पिलरलाइ मुख्य आधार मानेर स्ट्रिप नक्सा तैयार गर्नुपर्दछ।
स्थानीय सरकार वा सरोकार वालाहरु मौन रहने र सीमामा देखिएका अनेक समस्या तथा चुनौतीहरु समाधानका निम्ति कुटनैतिक पहल नगर्ने हो र ध्यान नदिने हो भने सर्बसाधारण जनता कहिलेसम्म लडाई गर्दै आफ्नो माटो बचाउने कार्यमा लाग्ने ?
सिमा विवादको समाधानका निम्ति रास्ट्रिय स्तरमै समाधान गर्न तर्फ अग्रसर हुनैपर्दछ ?
(लेखक जनता समाज पार्टीका नेता हुनुहुन्छ ।)